समयमै उपचार गर्नाले यो समस्या निको हुन्छ । डा. कर्णको अनुसार, यदि औंलाको कापमा पिप आइसकेको छ भने चिकित्सकले एन्टिबायोटिक औषधिसमेत सेवन गर्न प्रस्तावित गर्न सक्छ । यति मात्र नभए ब्याक्टेरिया/फङगस निरोधी औषधि संक्रमण भएको स्थानमा लगाउन समेत प्रस्तावित गर्न सक्छ ।
पेडिकेयर गर्न सबैभन्दा पहिले हलुका मनतातो पानी लिनुस् । यसमा आधा चम्चा हाइड्रोजन पेरोक्साइड राम्ररी मिसाउनुस् ।
तोरी, तेलसँगै बेसारको उपयोग प्राचीनकालदेखि नै गाउँ घरमा यस्तो समस्या हुँदा बेसारको उपयोग गर्ने गरिएको छ । बेसारमा एन्टिसेप्टिक गुणसँगै यसले घाउलाई भर्न सघाउँछ । तोरीको तेलले भने चिलाइको समस्यालाई कम गर्छ ।
यो समस्या धेरै कडा रूपमा नदेखिएको अवस्थामा लसुनको उपयोग गर्दासमेत फाइदा पुग्न सक्छ । नेपाली समाजमा परम्परागत रूपमै यस्तो समस्याका लागि लसुनको उपयोग हुँदै आएको औंल्याउँदै डा. कर्ण भन्छन्, ‘तर यदि समस्या धेरै कडा रूपमा देखिएको छ वा परम्परागत उपचार प्रक्रिया गर्दा झन् बढ्ने, बल्झिने आदि भए तुरुन्त छाला रोग विशेषज्ञको सल्लाह लिनुपर्छ ।’